ICooee Cottage kwiFama yeeNtyatyambo zoMthonyama - I-Airbnb
ICooee Cottage kwiFama yeeNtyatyambo zoMthonyama
ICooee Cottage ihleli kwifama yeentyatyambo ezintle eziyi-25 acre. I-cottage ijonge i-billabong yayo, inoxolo kwaye ikhululekile kunye nomgodi womlilo wangaphandle wokujonga inkwenkwezi kunye ne-marshmallow toasting ngeengokuhlwa ezipholileyo. Ungaphakathi kohambo olufutshane ukuya kumalwandle angabonakaliyo, iipaki zelizwe kunye nezaselwandle. Hlala upholile kwaye ufudumele kunye nomlilo wenkuni wangaphakathi. Iilwandle ezinobuhlobo kwizilwanyana zasekhaya zithetha ukuba unokuzisa neentsana zakho ezinoboya. Isilo-qabane ngasinye yi-$30 (max2). Zama izindlu zethu zaseCorroboree, eKiah okanye eBillabong ukuba iCooee ibhukisiwe.
ICooee Cottage inikwe iVintage Chic, nayo yonke into encinci ibonelelwe. Sibonelela ngomhlaba kunye nabantu abanobuhlobo be-organic Shampoo kunye ne-Conditioner, ulwelo lwezandla kunye nokuhlamba umzimba, kunye nezinto zokucoca izitya.
Indlu yethu encinci yabahlali intle kakhulu, imnandi kwaye iyathandwa.
Nceda usazise ukuba kwaye zingaphi izilwanyana zasekhaya oceba ukuza nazo (max2).
Usapho lwe-Fur luhlala nge-30 yeedola kwisilwanyana ngasinye sokuhlala. Iinkcukacha zentlawulo ziya kunikwa emva kokubhukisha okuqinisekisiweyo. Asikuvumeli ukuba ushiye isilwanyana sakho singajongwanga kwi-cottage. Izilwanyana zasekhaya ezishiywe zodwa zinokuba nomsindo, ingxolo kwaye zitshabalalise. Nceda uzigcine kuwe kwaye uphantsi kolawulo ngamaxesha onke, okanye....
Ukuba unqwenela ukuhamba intaba okanye utye ngaphandle ngaphandle kwesilwanyana sakho sasekhaya, bhukisha isilwanyana sakho kwi-Ulladulla Pet Motel. Iiyure zeofisi zi-8.30-10am kunye ne-3-4.30 ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu. Vula iintsuku ezintlanu ngeveki kodwa kungekhona ngeempelaveki kwaye uvale ngoDisemba ngaphambi kweKrisimesi kude kube sekupheleni kukaJanuwari. Ayivulwa ngeempelaveki. OKANYE abantu baseYurophu eBatemans Bay FB: europetsbb Ell iza kuwe. Iinombolo zoqhagamshelwano zinokufumaneka ngokulula ngokwenza uphando okanye ngokundwendwela amaphepha eFB. Ukubhukisha kubalulekile.
4.89 · Izimvo eziyi-149
Siphila kwiparadesi eyonakaliswayo. I-Termeil kunye ne-Bawley Point zijikelezwe ziiPaki zeSizwe, amaHlathi kaRhulumente, iilwandle ezicocekileyo kunye neePaki zaseLwandle. Ukuba uyonwabela indalo, le yindawo ekufuneka uyindwendwele.
Siyavuya ukukunceda nangaliphi na ixesha ukuba uyayifuna. Wamkelekile ukuba ujonge ipropati. Sinegadi zemifuno ephilayo kunye nemithi yeziqhamo kwindawo yethu yegadi engundoqo, owamkelekileyo ukuba ukhethe kuzo xa usitya ngexesha lokuhlala kwakho. Ukuba kukho into oyifunayo, sithumele umyalezo kwaye siya kuba khona ukuze sikuncede.
Siyavuya ukukunceda nangaliphi na ixesha ukuba uyayifuna. Wamkelekile ukuba ujonge ipropati. Sinegadi zemifuno ephilayo kunye nemithi yeziqhamo kwindawo yethu yegadi engundoqo, owa…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Termeil